यो विश्वको नागरिकको रुपमा मैले के गर्न सक्छु ?
जसले प्राकृतिक आपदा तथा मौसम परिवर्तन र तृतीय महायुद्ध भविष्यवाणी २०१५ अनि त्यसपछिको विषय लेख पढ्नुभएको छ अनि विचार गर्नुहुन्छ ‘अब के?’, हामीले केहि व्यावहारिक जानकारी प्रदान गरेका छौं कि तपार्इ प्रत्येक अवस्थामा कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो मूल उद्देश्य हो वातावरणमा विद्यमान रज-तम घटक न्यून गरि समाजमा सूक्ष्म मूलभूत सात्त्विक घटक बढाउने ।
हामीले यस कार्ययोजनालार्इ ४ भागमा विभाजित गरेका छौं ।
टिप्पणी : प्रत्येक वृत खण्डमा शारीरिक, मानसिक अनि आध्यात्मिक स्तरको समाधान–योजना समाहित हुन आवश्यक छ । शारीरिक स्तरको समाधान–योजनाको लागि, जस्तै कार्बनको प्रक्षेपणको मात्रा घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ, यस विषय जान्नको लागि climatecrisis.net जस्तो अन्य जालस्थ हेर्ने सुझाव दिन्छौं । तल दिएका समाधान–योजना मुख्यत: मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट दिएका छन् ।
वृत खण्ड १ : प्राथमिक स्तरमा म के गर्न सक्छु ?
वृत खण्ड २ : प्राथमिक स्तरमा अरुलार्इ सहायता गर्नको लागि म के गर्न सक्छु ?
वृत खण्ड ३ : व्यक्तिगत स्तरमा अर्को चरणहरु के हो ?
वृत खण्ड ४ : समाजलार्इ सहायता गर्नको लागि अर्को चरणहरु के हो ?
सबै भन्दा पहिला समय निकालेर जलवायु परिवर्तन, तेस्रो विश्वयुद्ध अनि राम्रो विरुद्ध नराम्रो, यी विषयहरुसँग परिचित र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् । सम्बन्धित अन्य विषयहरुको पनि अभ्यास गर्नुहोस् जसले हरेक दृष्टिकोणद्वारा हामी यस विषयसँग एकरूप हुन्छौं ।
साधनाको छ: मूलभूत सिद्धान्त अनुसार साधना गर्नाले नै हामी स्वयमा सत्त्व गुण बढाउन सक्छौं अनि साथमा उच्च स्तरको ईश्वरीय सुरक्षा-कवच प्राप्त गर्न सक्छौं ।
यदि तपार्इ कुनै प्रकारको आध्यात्मिक अभ्यास गरि रहनु भएको छैन भने साधनाको लागि केहि सरल व्यावहारिक पहलू उपलब्ध गराउँछौं । सुरु गर्न आज भन्दा कुनै राम्रो समय छैन । हामी सबै आध्यात्मको छ: मूलभूत सिदान्तमा आधारभूत साधाना गर्यौं भने समग्रमा सत्त्वगुण बढाउन अनि रज-तम न्यून गर्नमा सहायक हुन्छ ।
यदि तपार्इ वर्तमानमा केहि साधना गरिरहनु भएको छ भने, ध्यान राख्नुहोस् तपार्इले गरि रहनु भएको साधना अध्यात्मको छ: मूलभूत सिद्धान्त अनुसार छ । गम्भीरतापूर्वक तथा गहराईबाट साधनाको छ: मूलभूत सिद्धान्तका चिन्तन-मनन एवं मन्थन गर्नुहोस् । यद्यपि यो सिद्धान्त सरल लाग्न सक्छ, तर व्यावाहारिक स्तरमा आउॅंदा अधिकतर व्यक्ति डगमगाउँछन् ।
साधना गर्दा हाम्रो दृष्टिकोण पूर्णतया व्यापक हुनुपर्दछन् । यो अभ्यास कुनै संस्कृतिको विषयमा बिना कुनै पूर्वाग्रहको साथ, बिल्कुल यस्तो दृष्टिकोण जुन महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयमा राख्दछौं । यदि हामी अध्यात्मको सिद्धान्तको विषयमा स्पष्टता छौं भने मात्र स्वयंको साधनाको दिशा निश्चित गर्ने योग्य निर्णय लिन सक्छौं । साधकको आध्यात्मिक सोचलार्इ प्रेरित गर्नको लागि हामी विश्वको अनेक केन्द्रमा प्रवचन दिन्छौं अनि केहि प्रवचन SSRF कक्षा मा उपलब्ध गरेका छौं ।
यदि तपार्इसँग केहि प्रश्न छ भने कृपया हामीलार्इ यस लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्,‘हामीलार्इ सम्पर्क गर्नुहोस्’ |
कुनै पनि व्यक्ति एक्लै हुँदैन, हामी सबै समाजको घटक हौं । जहाँ पूरा विश्व गम्भीर परिणामले प्रभावित छ, त्यहाँ कुनै पनि व्यक्ति ती परिणामहरुबाट बाच्न सक्दैन । त्यसैले यो अत्यावश्यक छ कि विश्वलार्इ सकारात्मकताले प्रभावित गर्नको लागि हामी कदम उठाउन किन कि विश्वमा हाम्रो प्रियजन, नातेदार, मित्र, सहयोगी, सहकर्मचारी आदि छन्।
यो लेख आफ्नो मित्र, परिवार, परिचित अनि यस विषयमा आस्था राख्नेहरुलार्इ पठाउनुहोस् । हामी सबैलार्इ यी घटनाहरुका मूल कारण ज्ञात हुन आवश्यक छन् । त्यसपछि हामी के गर्छौं, त्यो हामीमा निर्भर छन् ।
जब तपार्इ अध्यात्मको सिद्धान्तको अभ्यास गर्नुहुन्छ, त्यसलार्इ पालन गर्नुहुन्छ तथा त्यसलार्इ बुझ्नु हुन्छ, शीघ्र नै अरुलार्इ बताउनुहोस् । अरुलार्इ भन्नको लागि राम्रो अभ्यास हुनेसम्म प्रतीक्षा नगर्नुहेस् । यदि तपार्इले ‘अ’ जान्नु भयो भने अरुलार्इ ‘अ’ को विषयमा बताउनुहोस्, ‘ज्ञ’ सम्म अभ्यास होस्, यसको लागि नपर्खिनुहोस् ।
साधना आरम्भ गरिसकेपछि यो आवश्यक हुन्छ कि साधनाको गुणात्मक अनि संख्यात्मक सुधार गर्नुपर्छ । उदाहरणार्थ, यदि तपार्इ प्रतिदिन एक घण्टा नामजप गरिरहनु भएको छ भने अर्को महिना प्रयत्नपूर्वक त्यसलार्इ दुर्इ घण्टासम्म बढाउन सक्छौं । यथार्थमा हामी ईश्वरको साधक बन्नु पर्छौं । साधक अर्थात :
जो ईश्वर प्राप्तिको लागि नै साधना गर्छ ।
व्यावहारिक जीवन व्यतीत गरि रहँदा पनि जसको जीवनको केन्द्रबिन्दु साधना अनि आध्यात्मिक प्रगति हुन्छ ।
जो प्रतिदिन साधना गर्छ ।
जसको साधना अध्यात्मको छ: मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।
जो सत्संगमा रहन्छ अनि नयाँ सिद्धान्त सिक्न नियमित रूपले साधकसँग सम्पर्कमा रहन्छ ।
जो नियमित आध्यात्मिक प्रगतिको लागि विशिष्ट ध्येय राख्छ अनि उनको साधना कुनै पनि एक स्तरमा नअटकियोस् यसको लागि सतर्क रहन्छ ।
जो स्वभावदोष अनि अहं-निर्मूलनको लागि प्रयास गर्छ ।
जो आपातकालमा उपायस्वरूप प्रदूषण न्यून (कम) गर्नको लागि अग्निहोत्र गर्छ ।
जब कोहि यस्तो स्थितिमा हुन्छ तब उनी प्रभावकारी रूपले पृथ्वीमा सत्त्वगुण बढाउनमा योग्दान गर्न सक्छ ।
माथि उल्लेख गरेका साधकका गुण हामीमा आउनाले हामी ईश्वरीय कार्य गर्नको लागि प्रभावी माध्यम बन्छौं ।
समाजमा सर्वव्यापी अध्यात्म प्रसारमा सहायता गर्नु, यो गुरुतत्त्वको अर्थात गुरुको कृपा पाउने सबै भन्दा गतिमान मार्ग हो ।